Ma u Maleyneysaan in Shirka London Wax Wanaagsan ka Soo Socdaan? | Building Momentum
Ma u Maleyneysaan in Shirka London Wax Wanaagsan ka Soo Socdaan?
Posted on February 5, 2012 by somaliamomentum
Waxaa maalmo kooban uun naga xigaan shirka loo ballan sayahay in lagu qabto waddanka Ingiriiska kaasoo sida la sheegay la isugu imanayo 23-ka February 2012-ka. Shirkan oo dowladda Ingiriisku gar-wadeenka ka tahay ayaa la sheegay in looga hadlayo qodobo toddoba gaaraya, kuwaas oo sal u ah dhibaatada soomaaliya ka jirta sida la sheegay.
Shirka London sida qababqaabadiisa ka muuqata wuxuu u muuqdaa mid wax badan ka duwan shirarkii horey loogu qaban jiray soomaalida. Waa markii ugu horreysay oo shir noocan oo kale ah la qabto, laguna qabto meel ka baxsan Africa. waxaa shirkan qabanaya mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda iyo dhaqaalaha badan caalamka. Sidoo kale dowladaha kale ee 40ka gaaraya ee shirkan ka qeyb galaya, ururada caalamiga ah iyo hey’ado kale ayaa shirkan ka dhigaya mid aan sahlaneyn, saadaal koobanna laga bixin karin.
Haddaba shirkan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore? Maxaa keenay in waqtigan laqabto? Maxaa laga filayaa in ay ka soo baxaan? Waxa laga wada hadlayo inta naloo sheegay oo keliyaa mise wax kalaa jira? Muxuu yahay shakiga hareeyay shirkan?
Muddo 21 sano kabadan ayay sii mareysaa inta wax maamul lagu sheego soomaaliya aan laga hir gelin. Muddada intaa le-eg shirar badan ayaa soomaalida loo qabtay midba midka kale ka daran, maanta waxay mareysaa in aan London isugu tagno, waxaa inoo dhiman Australia iyo Japan haddaanba horey loo qaban oo aanan la socon. Ogoow shirarkaa oo dhan qodobada hadda naloo sheegay waa ku jireen wixii la yiri waa lagu xallinayaa!
Dowladda Ingiriisku waxay sheegtay in In kabadan 40 dowladood iyo hey’ado kale oo caalami ah oo qaarkooda qaramada midoobay ka socdaan iyo urururo siyaasadeed ay shirkan ka soo qeyb gelayaan. dowladaha iyo ururada shirkan ka qeyb galaya intooda badan waa kuwa si toos ah ama si dadban ugu lug lahaa qalalaasaha soomaaliya. Dowlad welibana maslaxadeeda gaarka ah ayay ka eeganeysay intii uu burburku soomaaliya ka socday. Waxaase is-weydiintu tahay waxa markan isugu yeeray! Maxay tahay waxa ay qoonsadeen ama gubaya?
Waxaa aalaaba dhacda marka shir soomaalida loo qabanayo in loo sheego oo keliya in ay shir ka soo qeybgalaan, ma filayo in la heli karo dad si hoose u og waxa ajanduhu yahay /kama wado kan ay markaa noo sheegaan/ haddii markaa qolo ka mid ah wax shaki ah laga dareemo waxaa loo sheegaa oo keliya in laga caawinayo waxa ay dooneyso. Tusaale Somali-liand waxaa lagu qanciyaa in ay u tahay fursad ay caalamka ugu dhaadhicin karaan gooni-u-goosadka ay ku mashquushay mudadada intaa le’eg, isma weydiiyaan waa tuma dowladda muddada 21-ka sano ee ay sheekadani socotay ee maanta loo sheegayaa!. Puntland waxaa lagu qanciyaa in laga caawinayo sidii ay burcad badeeda ula dagaalami laheyd ama looga cirib tiri lahaa deegaamadooda, shalay sow ma aheyn markii ay u soo qalab iyo ciidan urusatay lagu yiri ma ahan adinka cidda howshaa qaban karta! Qeybaha kale ee koonfurtana waxaa loo sheegaa in laga caawinayo sidii ay Al-shabaab ama kooxaha kale uga guuleysan lahaayeen, sidoo kale la isma weydiiyo sida macquulka ku tahay in urur, koox ama shakhsiyaad laga adkaan kari waayo mudada intaa le-eg iwm.
Qodobada shirka looga hadlayo waxaa la yiri waxaa ka mid ah sidii loo heli lahaa xidid /root/-ka mushkiladda soomaaliya si xal loo helo. Arintaa ma sax baa? Ma wax dhici karaa in waqtigan oo muddo 21 sano ka badan aan ku soo baaba’nay isla qodobkaas, in maanta la is weydiiyo waxa uu xididka mushkiladda soomaaliya yahay? Sowtaad 4.5 nagu tiraahdeen waa xalkiina! Wax la xalliyaa oo qabyaalad ka xun ma jirtee, armaa meesha hadda ay joogto meel ka sii daran la geeyaa! Yaase hadda laga dhaadhicinayaa London ayaa xalka qabyaaladdu taallaa!.
Waxaa sidoo kale la yiri Shirku ma aha mid dib-u-heshiisiineed, ma aha mid awood qeybsi, mana aha mid dadka oo dhan (soomaali) looga yeeray. Hadduusan intaa oo dhan aheyn ma qorsho cusub oo maamul ayaad markan inoo heysaan? Haddii arrintu sidaa tahay goormaan innagu ismaamuli jirnay oo go’aanka laheyn? Howl telefoon keliya ku ekeyd iyo in Amisom la amro ama gudaha soomaaliyaba lagu qaban karay sida kii Garoowe, maxaa qaaradaha kale geeyay? Mise kuwa aad iska soo hormariseen ayaad naga hor wareejineysaan oo kuwo ka daran ayaad noo soo waddaan?
Nin baa laga sheegay reer hebel dadka kama badnee waa ka socod badan yihiin. Soomaalidu waa dad iska socda jecelna in meel walba ka muuqdaan xitaa haddii loo sheego in jiritaankooda lagu baabi’inayo. Ma aha dad leh aragti dheer oo waxa soo socda sii saadaalin kara ama kasii fakari kara. Dadka aaminay in Kampala,Nairobi, Adisababa ama jabuuti wax u qaban karaan ilama aha in ay ka hor iman karaan Ingiriiska oo ka mid ah dowladaha caalamka ugu waaweyn uguna dhaqaalaha badan arrin uu wato. Lama hayo shakhsi is-weydiiya maxaa meesha ka socda? Ma dan soomaaliyeed ayaa lagu hayaa? Xitaa isma weydiiyaan Maxaa adiga faa’ido ah oo gaar ah kuugu jira iska daa mid soomaalinimee? Ugama jeedo in shirarku wada xun yihiin ama wax xumi ka soo baxaan laakiin waxaan aad ula yaabay waxa dadkeena maskaxdii ka qaaday oo wax isu weydiin la’yihiin!
Maalin dhoweyd ayay aheyd markii qaar ka mid ah mucaaradka Somali-land ka soo yeeray hadal u eg in aysan ku qanacsaneyn shirka London. Waxaan is iri kuwanaaba la qaataa, inkastoo waxa ay markaa ka hadlayeen ee aheyd gooni-isutaaga aan ka soo horjeedo, haddana xitaa fikirka ah aniga dan iiguma jirto ama maxaa ka helayaa? waa wax isoo jiitay! Laakiin maxaa ka dambeeyay? Maalmo kama soo wareegin markii madaxweynahooda inta isugu yeeray intii meelaha ka qeylineysay muddo 2 saac aan ka badneyn ku qanciyay in laga qeyb galo shirka London. Malaha in madaxweynuhu soo hor fariisto ayay awalba doonayeene qadiyadba meesha ma oolin. Ama waxaa dhici karta wax kaloo khiyaali ah sida isku si soomaalida kale nalooma qaabilayo/wareysanayo/wax siinayo in uu ka dhaadhiciyay.
Waxaa sidoo kale qorshaha shirka ka mid ah ayaa la yiri in ciidamada AMISOM la kordhinayo. Haddii aad awal Amisom u tiqiinay waddamada Uganda, Burundi iwm, ama meelo fogfog wax laga raadin jiray, maanta saf hore iyo mid dambe cid walbaa waa u furan tahay, ciddii Afrikaan ah ee halkaa dani ka gasho waa Amisom. Kenya waxay xiratay shaarkii Amisom, waxaana ku kallifaya iyadoo isa siisay bad-weynta soomaaliya ee sida sahalka ah loogu saxiixay. Waana wax jira in qof markii horeba dhul aad leedahay kaa heystay kana soo ceshan weysay inuu markan ku hamiyo in uu kuwo kale ku darsado.
Itoobiya iyadu ahmiyad weynba uma aragto ka mid ahaanshaha Amisom, oo waa taa sidii ay doonto ka yeeleysa dadkeenii iyo dalkeeni, waqtigii ay doontana soo galeysa waqtigii ay doontana ka baxeysa. labadaba horey ugama qataneyn hantida, dhiigga iyo ciidda soomaaliya ee markan waxay raadinayaan waa dheeraad, ciddii ka ceshan laheydna waa kuwan aan u jeedno. Jabuuti oo laftigeedu ciidamo ka joogaan Soomaaliya kuwii ay IGAD isla ahaayeena AMISOM noqdeen meel ay ku harto maanta ma joogto. Xitaa soomaalida qudheeda ayaan aaminsanahay in kuwo badan oo ka mid ah AMISOM isu heystaan oo soomaalinimadiiba meel iska dhigay.
Haddaad awal maqli jirtay dowlado shisheeye ayaa soomaaliya dacalada heysta oo ay ka dagi la’dahay, maanta shirka London waa ku dhan yihiin. Bal tiri koow iyo laba dheh, yaad isleedahay waa ka maqan yihiin?. weliba waxaa markan dheer kuwo kale oo lagu qurxiyay, ama dhaqaale ha loogu xisho ama dano kale halaga lahaadee. Maxaa intaa maanta meel isugu keenay? Ma la isu tanasulay oo Soomaaliya waxaa loo qorsheeyay in hal dowlad ama urur looga dambeeyo? Ma haddaa arrintaas lagu gudo jiraa? Ma kheyraad-ka laga shanqariyay ayaa sidii loogu heshiin lahaa qaabkeedii la wadaa? Mise maslaxado kale oo dhaqaale oo meesha ka baxay ayaa dowladahani soo geliyay, oo waxaad la raadinayaa sidii loo soo celin lahaa?
Ogoow akhriste su’aalaha aan is-weydiinayo ama aan ku weydiinayo kama foga waxa halkaa ka jira, marna ha filin in shir soomaali dibedda loogu qabtaa uu xal kuu keeno. Waase wax dhici kara iyo qeyb soomaalida ka mid ah wixii ay rabeen /kama wado xal/ halkaa uga soo baxaan.
Arinta kale ee xiisaha leh ee shirka ku jirta waa la dagaalanka burcad badeeda. Yaa Burcad badeed ah? Xaggee ka jiraan? Maxay ku aas-aasmeen? Yaa abuuray?Yaa wax ka qaban kara? Sow su’aalahaa la is weydiin mayo marka meesha la isugu tago waaba haddii la soo hadal-qaadee? Mase la is weydiiyay horta cidda ogol in soomaali in ay wax noqoto! Yaase u heysta in shakhsiga soomaaliga ah wax qaban karo haba la caawiyee.
Ciyaarta soomaalida lagu hayo waxaa ka mid ah in hal meel la isugu keeno Somali-land, Puntland, Gal-mudug, ururka Ahlu sunna Wal-jamaaca, qeybo kale oo soomaalida ka mid ah iyo dowladda FKMG ah oo sheegata in ay kuwaa iyo kuwo kale oo ka maqan ay dowlad u tahay. Intaas oo qolo ma siman yihiin? Magac ahaan iyo maamul ahaan midkaad doonto ka eeg ma u siman yihiin? Ma isku hadaf iyo ujeeddaa? Ma waan xitaa la is-weydiineyn qaanuun ahaan sidee SAX ku tahay in Dowlad iyo maamulo si siman shir looga wada qeyb geliyo? Haddii meesha dowladi ka jirin maad maamul goboleed u aqoonsataan sidaana isugu keentaan? Waxay na leeyihiin dowladda soomaaliyeed ayaa jirta haddana waxay ku leeyihiin iyada keligeed lama xaajooneyno.
Jahwareer kale waxaa ah, maamul dowlad sheeganayay muddo 21 sano ah uu maalmahan bilaabo in uu shirarka soomaalida ka qeyb galo. Waxaase iiga daran dadka soomaalida ah ee goboladaa ka soo jeeda oo wixii loo sheego iska qaadanaya. haddaadse talada yurub ee ku oggoleysiisay in aad soomaaliweyn meel la soo fariisato, maxaad ku diiday midda walaalkaa soomaaliga kula ah kaaga imaneysa? Waa wax iga yaabiyay!!
Jah-wareerka iyo ciyaarta soomaaliya ka jirtaa dhammaan mayso inta sidan wax ku socdaan ee waxaa jeclaan lahaa in aan ummadda soomaaliyeed weydiiyo:
Ma u maleyneysaan in shirka London wax wanaagsan ka soo socdaan? Ma u maleyneysaan in maadaama aad tashan weydeen markan la idiin talin doono? Ka warama haddii qaabka laguugu talin doono lagasoo min-guuriyo nidaamkii faasid-ka ahaa ee aad aqbashay ee 4.5 oo weliba .5-ku adigu (soomaali) noqoto afarta kalena dowlado ama ururo shisheeye noqdaan ama mid ka sii xun? Maxaadse ku diideysaa haddaad markii hore ku qanacsaneyd?. Ka warama haddii shirku ka soo baxo hadal ah in Magaalo madax laga dhigo meel ka baxsan Muqdisho, sida Hargeysa ama Garoowe, inta kalena maxmiyad la geliyo? Ma ku qanceysaan oo ma ku heshiineysaan SIDAA!! mise xalku weli gacmihiinuu ku jiraaye oo dhibka idin heysta adinkaa garanayee intaad shirarkan aan dantu idiinku jirin iska deysaan ayaad ummadda dhibka ka saari doontaan?
Suore sfruttate e umiliate: la denuncia dell'Osservatore romano - Sky Tg24 March 2, 2018
Padre Pio: il racconto delle Stimmate davanti al Sant'Uffizio - Servizio Informazione Religiosa March 16, 2018
San Giovanni Rotondo. Il Papa: «Oggi si scarta la gente, con più ... - Avvenire.it March 17, 2018
Il diniego. La lettera di Ratzinger, ecco l'originale - Avvenire.it March 17, 2018
Più grandi della colpa /9. L'economia della piccolezza - Avvenire.it March 17, 2018
Fede e orientamento sessuale. «Sposi dopo 25 anni per nostro figlio ... - Avvenire.it March 17, 2018
Il caso. L'odissea della nave di Open Arms con 216 migranti a bordo - Avvenire.it March 17, 2018
Veglia di preghiera dei giovani in attesa di papa Francesco - Avvenire - Avvenire.it March 16, 2018
Avvenire: la prima pagina di domani 17 marzo. Riforma incompleta ... - Servizio Informazione Religiosa March 16, 2018
Press release: Investigators from chemical weapons watchdog to arrive in UK March 18, 2018
Press release: Salisbury attack: statement following British Ambassador’s meeting with Russian government March 17, 2018
Speech: Britain needs its allies to stand with us against Russia: article by Boris Johnson March 15, 2018
News story: Novichok nerve agent use in Salisbury: UK government response March 14, 2018
Press release: Joint Statement following the second UK-Bangladesh Strategic Dialogue March 16, 2018
Israeli attacked after accidentally entering PA town March 18, 2018
One critically wounded in attack in Old City of Jerusalem March 18, 2018
Israeli tech takes on Judea and Samaria rock terror March 18, 2018
Hamas threatens head of Samaria Council March 18, 2018
Soldier disciplined for criticizing IDF Chief Rabbi March 18, 2018
IDF destroys terror tunnels in South March 18, 2018
Weapons confiscated in village near car-ramming attack March 18, 2018
Murderer of Rabbi Itamar Ben Gal apprehended March 18, 2018
Deputy Minister Oren: Change the rules of engagement March 18, 2018
IDF attacks Hamas target in Gaza March 18, 2018
Community assistance leads to arrest of Northern Cape 'robber'
Ramaphosa congratulates Chinese president on his re-election
Blow to free trade deal as Nigeria skips African summit
Family calls for justice for slain Taxify driver
Elderly man dies while surfing in Jeffreys Bay
Somalia clans secure peace with death sentences and hefty fines - BBC News March 18, 2018
Somalia: Humanitarian Dashboard - February 2018 (issued on 16 ... - Reliefweb March 17, 2018
Qatar Charity opens model school in southwestern Somalia - The Peninsula Qatar March 18, 2018
Somalia: Jawari challenges opposition MPs to oust him through the ballot - Garowe Online March 18, 2018
Egypt donates two tonnes of medical supplies to Somalia: Egyptian ambassador - Ahram Online March 18, 2018
Press release: Minister for Europe visits Bosnia and Herzegovina March 16, 2018
Speech: Minister for Africa urges action to tackle illegal wildlife trade March 16, 2018
Speech: Salisbury nerve agent attack: UK OSCE Permanent Council statement March 15, 2018
Press release: Celeb-led travel trends prompt FCO warning this Easter March 15, 2018
Statement to Parliament: Minister Field's statement on the Rohingya crisis: 15 March 2018 March 15, 2018
Trump Assails Special Counsel Mueller as Politically Biased in Russia Probe March 18, 2018
Republican Senators Spar over Trump Nominees to Head State Department, CIA March 18, 2018
Bundesbank's Buch Adds to Calls for Cryptocurrency Regulation March 18, 2018
Paralympic Chief Closes Pyeongchang Winter Games March 18, 2018
Nigeria Skips African Summit in Blow to Free Trade Deal March 18, 2018
Li Keqiang Appointed for Second Term as Chinese Premier March 18, 2018
Armed Anglophone Separatists in Cameroon Kidnap 40 March 18, 2018
Pakistan: Afghan Peace Offer to Taliban 'Light at End of Tunnel' March 18, 2018
Dadka Ruushka oo Doorasho u Dareeray March 18, 2018
Jawaari oo Ogolaaday in Mooshinku sii Socdo March 18, 2018
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha March 18, 2018
ONLF: Qalbi-dhagax ha la sii Daayo March 18, 2018
Muqdisho: Xarrun Lagu Tababaro Ardada Dhameysta Barashada Caafimaadka March 18, 2018
Dowladda Suuriya oo sheegtay in 80% ay la wareegtay bariga Quuda March 18, 2018
Erdogan: Waxaan Kurdiyiinta Suuriya ka qabsanay magaalada Afrin March 18, 2018
Ergo ka socota labada Kuuriya iyo Mareeykanaka oo ku kulmaya finland March 18, 2018
khubaro caalami ah oo ka qeyb qadan doonto baaritaannada suntii loo adeegsaday Sergei Skripa March 18, 2018
Agaasime ku xigeenkii hore ee FBI-da oo soo bandhigay warqad sir ah March 18, 2018
Yuu noqon doonaa ra’isalwasaaraha xiga ee Itoobiya? March 17, 2018
Dadweynaha Ruushka oo u dareeray goobaha codbixinta March 18, 2018
Kumanaan wali ka qaxaya bariga Quuta March 18, 2018